अँग्रेजी भाषा सजिलाे तरिकाले कसरी सिक्न सकिन्छ ? जान्नुहाेस - ज्ञानविज्ञान
अँग्रेजी एउटा सामान्य भाषा हाे । तर याे अाफ्नाे मातृभाषा नहुनु र याे अान्तरिक भाषा हुनुले हामीले यस भाषा सिक्नुलाइ दबाबकाे रूपमा लिन्छाैँ । तर दबाबमा रहेर तपाइले केही कुरा पनि सिक्नुहुन्न त्यसकाे लागि तपाइसँग चाहना, उत्सुकता र लगनशिलता हुनुपर्छ । अँग्रेजी सिक्नु असम्भव छैन र त्यलाइ सम्भव बनाउाकाे लागी यहाँ केही सहयाेगी टिप्स राखिएकाे छः
सबैभन्दा पहिले त अँग्रेजीलाइ सामान्य भाषाकाे रूपमा लिनुहाेस् । यसलाइ ‘डर’ र मानिसकाे ज्ञान अथवा स्तरकाे मापन गर्ने अाधारकाे रूपमा लिनुहाेस् ।किताबमा अँग्रेजी ब्याकरणका शुत्र घाेकेर तपाइलाइ अँग्रेजी अाउँदैन । त्याे सिकेकाे कुरालाइ अाफुले बाेल्दा प्रयाेग गर्ने गर्नुहाेस् ।
घरमा वा साथीहरूसँग अँग्रेजी बाेल्ने वातावरणकाे सिर्जना गर्नुहाेस् ।गल्तीहरूसँग नडराउनुहाेस् । बाेल्दा वा लेख्दा केही बिग्रीन्छ कि भन्ने डरले भाषा सिकिदैन । गल्ति भएर केही हुँदैन, त्यसलाइ सुधार्दै लग्नुपर्छ । त्यसैले साथी,शिक्षक मात्र हाेइन, पर्यटकहरू भेट्दा समेत बाेल्नुहाेस् ।
स्मार्टफाेन चलाउनुहुन्छ भने, त्यहाँ अँग्रजी शब्दकाेषकाे एप्लिकेशन हुन्छ, त्याे डाउनलाेड गर्नुहाेस् वा पकेट शब्दकाेष अाफुसँग राख्ने गर्नुहाेस् ।फेसबुक म्यासेन्जरमा वा अरू माध्यममा साथीहरूसँग वा अरू काेही व्याक्तिसँग ‘च्याट’ गर्दा अँग्रेजी भाषाकाे प्रयाेग गर्नुहाेस्।
उताबाट म्यासेज पठाएकाे व्याक्तिले पठाएकाे कुनै शब्द बुझ्नुभएन भने शब्दकाेशमा हेरेर अर्थ पत्ता लगाउनुहाेस् र फेरी अँग्रेजीमै जवाफ फर्काउनुहाेस् ।अँग्रेजी पत्रिका पढ्नुहाेस् । यसरी पढ्दा एउटा शब्दमा नअल्झेर पुरै वाक्य पढ्नुहाेस् र पुरै वाक्यकाे अाधारमा अाफुले त्यहाँ नजानेकाे शब्दकाे अर्थ अनुमान गर्नुहाेस् ।
त्यस्ता शब्दलाइ चिन्ह दिनुहाेसस् वा टिपाेट गर्नुहाेस् र शब्दकाेषमा हेर्नुहास् । यसरी पढ्दा तपाइलाइ पुरै वाक्य बनाउन र बाेल्न थाहाँ हुँदै जान्छ ।अाफुले सिकेका नयाँ शब्दलाइ साथीहरूसँग बाेल्दा वा लेख्दा प्रयाेग गर्नुहाेस् । जसले गर्दा तपाइलाइ ति शब्दहरूकाे बानी बस्छ ।
अँग्रेजीमा लेखिएकाे किताब दैनिका एक वा दुइ पेज पढ्छु भन्ने अाफैसँग सँकल्प गरेर समय तालिका बनाएर पढ्न थाल्नुहाेस् । किताब पढ्दा पनि पहिले पुरै वाक्य पढेर शब्दहरूकाे अनुमान गर्ने र त्यसपछी मात्र अर्थ हेर्ने गर्नुहाेस् ।अँग्रेजी भाषामा दैनिक रूपमा अाफ्नाे दिनचर्य, अाफुमा उब्जिएका भावना वा केही न केही लेख्ने गर्नुहाेस् ।
अँग्रेजी चलचित्र तथा म्युजिक भिडियाे हेर्ने गर्नुहाेस् । त्यहाँ बाेलिएका शब्दहरू तल सबटाइटलमा लेखिएकाे हुन्छ, ति हेर्दै सुन्रुहाेस् । त्यस्तै पहिले अाफुले अँग्रेजी गित सुन्ने अनि त्याे गितका शब्दहरू मात्र लेखिएकाे भिडियाे पनि भेटिन्छ, त्याे हेर्नुहाेस् ।अँग्रेजी बाेल्न सिकाउने विभिन्न वेबसाइट तथा किताबहरू हुन्छन्, ति हेर्ने गर्नुहाेस् ।
दिनमा कुनै न कुनै नयाँ शब्द सिक्ने प्रण गर्नुहाेस् । कुनै एउटा नयाँ शब्द सुन्नुभयाे भने, दुइपटक भन्दा बढि त्यसलाइ उच्चाहरण गर्ने वाक्यमा प्रयाेग गर्ने काेसिस गर्नुहाेस् ।
फरर अंग्रेजी बोल्न चाहनुहुन्छ ? यी ५ कुरामा ध्यान दिनुहोस्
अंग्रेजी भाषाअहिले यतिधेरै सर्वव्यापी भइसकेको छ कि यसको प्रयोग हरेक ठाउँमा आवश्यक पर्छ । सामान्य एउटा जागिर खानका लागि पनि अंग्रेजीमा राम्रो ज्ञान हुनुपर्ने भइसक्यो । धेरै पढेका मानिसहरु पनि अंग्रेजी नजानेकै कारण पछि परेको उदाहरणहरु प्रसस्तै पाइन्छन् ।
त्यसैले अहिले हरेकको चाहना हुन्छ, अंग्रेजी राम्रोसँग बोल्न सकियोस् । यदि तपाईं पनि त्यस्तै चाहनुहुन्छ भने हामीले यहाँ केही टिप्स दिँदैछौं, जसले तपाईंलाई फरर अंग्रेजी बोल्न सघाउँछ ।
१. ग्रामर धेरै नपढ्नुहोस्
यो कुरा अंग्रेजीलाई दोश्रो भाषाकारुपमा पढिरहेका मानिसलाई अनौठो लाग्न सक्दछ । तर, यो एउटा महत्वपूर्ण नियम हो । परीक्षामा पास हुनलाई ग्रामर पढ्न सक्नुहुन्छ, तर फरर अंग्रेजी बोल्न ग्रामर पढेरमात्र पुग्दैन । ग्रामरका जटिल नियमहरु जति धेरै पढ्नुहुन्छ, त्यतिधेरै तपाईं कन्फ्युजनमा पर्न थाल्नुहुन्छ ।
बोल्ने बेलामा पनि ग्रामर ख्याल गर्दै जोडघटाउ गर्न थाल्नुहुन्छ, यसो गर्दा कहिल्यै पनि फरर अंग्रेजी बोल्न सकिन्न । ग्रामरलाई सर्लक्कै निलेका केही व्यक्तिले अंग्रेजी राम्ररी बोल्न सक्दैनन्, तर ग्रामरको सामान्य ज्ञान भएकाहरुले फरर बोल्दछन् । यसको कारण भनेको बोल्ने अभ्यास नै हो । त्यसकारण तपाईंले पढ्नु भन्दा बढि बोल्ने अभ्यास गर्नुभयो भने तपाईको अंग्रेजी एक दिन फरर हुने कुरामा कुनै शंका छैन ।
२.फ्रेज वा शब्दको समूहबारे सिक्नुहोस् र पढ्नुहोस्
प्राय मानिसलाई शब्दलाई छुट्टा-छुट्टै घोकेपछि अंग्रेजी बोल्न सकिन्छ भन्ने लाग्दछ । शब्दकोषमा भएका सबै शब्दहरु घोकेर वाक्यमा प्रयोग गर्न सकिएन भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । वाक्यमा प्रयोग गर्न शब्दसँगै शब्द समूह (फ्रेज)हरु बारे पनि ज्ञान हुनु आवश्यक हुन्छ ।एउटा फ्रेजबारे सिक्नु भो भने सोही फ्रेजको आधारमा कैयौं शब्दलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर कैयौँ शब्द जानेर ती शब्दको समूह बनाएर वाक्यमा प्रयोग गर्न फ्रेजको ज्ञानविना कठिन हुन्छ । त्यसकारण भोक्याव्युलरीलाईभन्दा फ्रेजलाई बढी ध्यान दिनुहोस् ।
३. अनुवाद नगर्नुहोस्
अंग्रेजीमा वाक्य बनाउँदा आफूले बोल्ने मातृभाषाका शब्दलाई हुवहु अनुवाद नगर्नुहोस् । शब्दको क्रम वा अर्डर भाषापिच्छे फरक हुन्छ । मातृभाषा अनुसार अनुवाद गर्दा एकातर्फ ढिलो हुन्छ भने अर्कोतिर गलत हुन पनि सक्दछ । अनुवाद गर्नुभन्दा आफूले जानेको वाक्य वा फ्रेजलाई सन्दर्भ अनुसार प्रयोग गर्नुहोस् । यसो गर्दा मैले के बोलिरहेको छु वा के बोल्ने हो भन्नेतर्फ ध्यान दिनुहुँदैन । बोल्दै जाँदा नै तपाईले सिकेका हरेक वाक्य वा फ्रेज स्वस्फूर्तरुपमा आउँदछन् ।
४.सुनेको वाक्य वा फ्रेजलाई बोल्ने अभ्यास गर्नुहोस्
कुनै पनि भाषा फरर बोल्नका लागि एउटैमात्रै उपाय भनको बारम्बार बोल्ने अभ्यास गर्नु हो । तपाईले देख्नुभएकै छ, साना-साना बालबालिकालाई सुरुमा भाषा बोल्न सिकाइन्छ । त्यसपछि मात्रै पढ्न र लेख्न सिक्दछन् । भाषा सिक्ने क्रम भनेको पहिला सुन्ने हो, त्यसपछि सुनेको आधारमा बोल्ने अभ्यास गर्ने हो ।बोल्न सिकेपछि पढ्न सिक्ने र अन्तिममा लेख्न सिक्ने हो ।तर, अंग्रेजीलाई दोश्रो भाषाका रुपमा पढिरहेका मानिसका लागि भने दुईवटा समस्या आइपर्न सक्दछन् ।
पहिलो भनेको प्राय: संसारभर नै सुरुमा पढ्ने अभ्यास, त्यसपछि सुन्ने अभ्यास, अनि बोल्ने र अन्तिममामात्रै लेख्ने अभ्यास गरिन्छ । दोश्रो समस्या भनेको सुन्ने अभ्यास गर्दा सुनेरैमात्रै बस्ने र पढ्दा पनि मनमनै पढ्ने गर्दा बोल्ने अभ्यास गर्न नसक्नु हो । त्यसैले सुन्दा पनि जे सुनिएको छ त्यसलाई चर्कोसँग बोल्ने र पढ्दा पनि आवाज निकालेर पढ्ने गरियो भने बोल्ने सीप चाँडो विकास हुनसक्दछ ।
५.आवश्यक सामाग्री मात्रै पढ्नुहोस्
अंग्रेजी बोल्न चाँडो सिकिहाल्छु भनेर जे पायो त्यही सामाग्री पढ्ने वा सुन्ने काम त्यति फलदायी हुँदैन । धेरै ठाउँमा प्रयोग गरिने र प्राय सबै मानिसले प्रयोग गर्ने शब्द, फ्रेज तथा वाक्यलाई सिकेरमात्रै अंग्रेजी फरर बोल्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्दछ । दैनिक बोलीचालीमा प्रयोग नहुने कुरा धेरै पढेर फरर बोल्न सकिँदैन ।
यस प्रकारको अध्ययन त आधारभूत ज्ञान जानेपछि गर्ने हो । त्यसकारण सामाग्री छनौट गर्दा सही सामाग्री छनौट गरेर प्रयोगमा ल्याउनुपर्दछ ।त्यस्तै अंग्रेजी मातृभाषा नभएका व्यक्तिसँग कुरा गर्दा यसको एउटैमात्र फाइदा छ, त्यो के भने बोल्ने क्रममा एकअर्कालाई सहयोग गर्न, हौसला बढाउन सकिन्छ ।
तर यसको एउटा वेफाइदा छ । त्यो के भने गलतरुपमा प्रयोग गरिएको शब्द वा वाक्यलाई नै सही भन्ठानेर त्यसैलाई प्रयोग गर्ने बानी बस्न सक्दछ । त्यसैले अंग्रेजी मातृभाषा भएका मानिससँग बोल्दा चाँडो र सहीरुपले यस भाषालाई सिक्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि ख्याल राख्नु आवश्यक हुन्छ ।
Don't Miss it बिहान उठ्ने वित्तिकै बेसार पानी खाने गरौ, कहिल्यै नसोचेको फाइदा पाउनुहुनेछ !
Up Next जगिंङ गर्दा हुन्छन् यस्ता फाइदै फाइदा
हाम्रो घर आँगन मै पाइने जडीबुटि एलोभेरा अर्थात् घ्यूकुमारी हो । जसलाई हामी आयुर्वेदिक औषधिको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका पनि छौं…